Runako Midziyo, Chiremba uye Chigadzirwa Dhizaini - Sincoheren
Kurapa kwekukwegura kurapwa
Hutano Kumeso Ganda
Kupisa Kwemafuta Uye Kuveza Muviri
Laser Bvudzi Kubvisa
Tambanudza Mako Kubvisa
Kuongorora kwemhando yepamusoro paKisimusi ...
Muvhiki yekutanga yaZvita, kuti tigamuchire kuuya kweKisimusi, Sincoheren Beijing fekitori yakatangawo kugadziriswazve kwechigadzirwa uye kuongorora kwehunhu kamwe pagore. Kune aripo anopfuura makumi mashanu mahunyanzvi ehunyanzvi mufekitori yeBeijing, uye mushandi wega wega anotevera Prod-yakagadzirwa prod ...
Musi waNovember 12, Sincoheren rel ...
Musi waNovember 12, Sincoheren akaburitsa chigadzirwa chazvino – Emsculpt. Iyi kambani yemuchina yanga ichitsvaga nekuvandudza muchina uyu kwemakore maviri uye yaita zviuru zvemakiriniki bvunzo, kungo gadzira chigadzirwa cherunako icho chinoenderana nevatengi. Pane mhando mbiri dzep ...
Pa Gumiguru 31st, Sincoheren Grou ...
Musi waGumiguru 31st, Sincoheren Boka rakaita musangano wepamwedzi wekutengesa musangano. Vanenge mazana maviri vatengesi veboka vakapinda musangano. Vashandi vanobva kubazi reShenzhen nebazi reXiamen vakamhanyirawo kumuzinda weBeijing kunotora chikamu. Varidzi vezvigadzirwa, mainjiniya eR & D nevamwe vese vakapinda musangano. ...